Kollywood Hangama | » के मेगास्टार निखिल उप्रेतीले छाडेका हुन् फिल्म उद्योग ? कहाँ पुग्यो आयो भैरबकाे काम ? के मेगास्टार निखिल उप्रेतीले छाडेका हुन् फिल्म उद्योग ? कहाँ पुग्यो आयो भैरबकाे काम ? – Kollywood Hangama
के मेगास्टार निखिल उप्रेतीले छाडेका हुन् फिल्म उद्योग ? कहाँ पुग्यो आयो भैरबकाे काम ?
Published On: Sunday November 1, 2020
कलिउड हंगामा । नेपाली चलचित्र उघाेगमा लामो समयसम्म एकछत्र राज गरेका एक्सनकिङकाे उपनामले चिनिने मेगास्टार निखिल उप्रेती कमब्याक फिल्म भैरब सफल भएपछि एकाएक व्यस्त भएर पुनः गायब भएका छन् ।
उनले भैरब पछि खेलेका केही फिल्म बक्स अफिसमा खासै नचलेपछि पुनः दमदार कमब्याककाे तयारीमा रहेका निखिल उप्रेतीले आयो भैरब बनाउने तयारी थालेको झन्डै २ बर्ष भयो । लकडाउन अगाडिनै छायांकनमा जान तयार भएको फिल्म लकडाउनकाे कारण बन्न सकेन । आयो भैरब काे हाइप ह्वात्तै बढिरहदा निखिलले महानायक राजेश हमाल सँग एक केमियाे राेलकाे लागि अफर गरेका थिए, निखिलले राजेसलाई अफर लिएर भेट्न जाँदा खिचेको फोटाे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भाइरल समेत भयो । उक्त फाेटाेले फिल्मकाे हाइप झनै बढायो । तर लकडान हटेर सामान्य अवस्था भैसक्दापनि किन आयाे भैरबकाे कुनै अपडेट अाएन त ?
निखिल निकट श्राेतका अनुसार निखिल उप्रेती अहिले निकै ठुलो प्राेजेक्टकाे तयारीमा छन्, उनलेे आफ्नाे दाेस्राे कमब्याकलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेकाछन् । निखिलले नेपाली चलचित्र इतिहासमै पहिलोपटक एक नेपाली योद्धा काे भुमिकामा अभिनय गर्दैछन् । झन्डै ८ करोड बजेट अनुमान गरिएको फिल्मलाई निखिल उप्रेती स्वयंले निर्देशन गर्दैछन् । फिल्मकाे सम्पूर्ण पोस्टप्राेडक्सनकाे काम भारत र अमेरिकामा गरिने र फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा समेत डब गरेर विश्वव्यापी प्रदर्शन गर्ने निखिलकाे योजना रहेको छ ।
अहिले निखिलकाे साथमा इतिहासविद् सहितको टिम स्क्रिप्ट लेखन कार्यमा व्यस्त रहेको कलिउड हंगामालाई जानकारी प्राप्त भएको छ । निखिल आध्यात्मिक भएपछि फिल्मबाट टाढिए भन्ने चर्चा चलिरहेको समयमा निखिल भने आध्यात्म सँग राष्ट्रियस्तरकाे फिल्म मेकिङ्मा समेत अगाडि बढ्दै गरेको धेरैलाई पत्तो नहुन सक्छ ।
उता, विश्वस्त श्राेतका अनुसार निखिल अबकाे केही महिना पछि समबाेधी नामक संस्था मार्फत फरक कार्यक्रम सहित युवाहरुमाझ आउदैछन् । जुन कार्यक्रम मार्फत निखिल नेपाली युवा माझ साेझै उपस्थित हुनेछन्, युवाहरुमा उर्जा थप्न । एकासाथ फिल्म र समबाेधी कसरी अगाडि बढाउछन् त्यो निखिल आफै जानुन् ।